Orinasa famokarana vokatra vita an-trano - Mpanamboatra vokatra famokarana lamba any Sina
Pillow White Polyester Pillow Core
Lamba landihazo 100%, ahazoana aina ary azo iainana.
Ny volon'ondry ambany dia aleony, izay manana halemem-panahy tsara, fitehirizana ny hafanana ary elastika, tsy maivana amin'ny endriny fotsiny, avo be, tsy mora simbaina, maivana amin'ny lanja, miaina ary tsy milamina.
Star Print Gray Blanket
Teknolojia stitch triangular manodidina ny bodofotsy iray manontolo hisorohana ny zorony tsy hianjera, tsara tarehy.
Voasarim-bolo azo velarina
Ny lamba voafantina dia maivana sy malefaka kokoa, ary ireo fibre polyester voafantina voafantina dia voatenona tsara ary voahodina tsara. Mahatsiaro ho malama sy fisaka ilay quilt, milamina sy miaina. Fanjairana lamba harato, miaina ary ahazoana aina, sady mana-tarehy no azo ampiharina.
Pillowcase fiarovana ny tontolo iainana Tencel
Ny lamba Tencel dia manome endrika malefaka hazavana mahery vaika, fanosorana ny hatsembohana ary fanesorana ny hamandoana alaina amin'ny zava-maniry, tsy misy akora manimba
Lamba vita amin'ny fibre voafantina, marefo, malefaka, mangina ary malefaka, tsy manjavona ary tsy mandoa volo, matory mora, ary mahatakatra ny kalitao avy amin'ny loharano. Rehefa ampiasaina ilay kidoro dia manana fahadiovan-drivotra tsara izy, malefaka sady mafana, Akaiky ny hoditra, ary mamorona torimaso mahasalama.
Sofas isan-karazany sy seza ondana
Ny bodofotsy iray manontolo dia vita amin'ny zaitra telozoro manodidina azy, miaraka amin'ny sisiny avo lenta, ary ny fiaraha-miaina sy ny hatsarana.
Kidoro azo namboarina
Manaiky ny volavolan-damba lamba an-trano miaraka amin'ny habe, loko ary lamina samihafa amin'ny filàna samihafa ny orinasa, ary mandray anao handanjalanjana santionany.
Lamba vita amin'ny polyester vita amin'ny kalitao avo lenta, mora amin'ny hoditra ary mahazo aina, tsy misy bala manakaiky ny vatana, fanoherana mahery vaika, fanoherana vovoka tena tsara amin'ny lamba, azo alaina ary sariaka amin'ny tontolo iainana, Anti-Mite, fanamohana ny hamandoana ary fahalemen'ny rivotra.
Quilted Cotton Quilt miaraka amin'ny fantsona mifanohitra
Ny lamba voafantina dia maivana sy malefaka kokoa, ary landihazo manta voafantina. Aorian'ny fanenomana tsara dia mahatsiaro malama sy fisaka ilay quilt, milamina sy azo miaina. Famenoana feno, marefo, hafanana, fahafenoana sy fahalemena, fitazonana hafanana tsara kokoa.
Mifanohitra amin'ny lamba fanontam-pirinty
Marefo sy marevaka, malefaka sady marefo amin'ny hoditra, mankafy ny fampiononana Ny kofehy tenona kofehy dia malefaka sy lava, malefaka kokoa sy malefaka kokoa ny mikasika, ary tsy mora ny mamono herinaratra mifono vy. Mitondrà fifaliana torimaso tsara.
Bodofotsy fibre vita amin'ny savony
Ny fehiloha volom-borona vita amin'ny diamondra mahazatra dia nitafy fomban-drazana anglisy mahery.
Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Lamba firakotra roa sosona, Fanodinana santionany sy famokarana,